Muhiimadda sawir hordhac ah oo wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Naqshad wanaagsan ayaa noqon karta bilowga naqshad weyn. Waxaa laga yaabaa inay tahay soo koobitaankii ugu habboonaa ee aan kuu sheegi doono, maaddaama haddii aan ka caddayno fikradihii hore, fulinta naqshaddu waxay noqon doontaa mid aad u fudud, fudud oo fudud in la fuliyo.
Waa inaad cadeysaa shan tilmaamood:
Naqshadeyntayadu waa inay dhammaystirnaato oo ay tixgelisaa waxa ku jira.
Aad ayey muhiim u tahay in la isticmaalo fayl iyo lakabyo si loo abaabulo loona awoodo in la qariyo oo la muujiyo wax kasta oo la dhadhaminayo.
Faallooyinka ayaa ka mid ah caawimaadda ugu weyn ee naqshadeeye ama barnaamij-sameeye kasta, isticmaal.
Ha yareyn faahfaahinta, way ka fududdahay inaad waxyaabaha ka saarto intii aad ku dari lahayd, ha u dhaafin wax fikrado dabacsan.
Haddii aad dhowr ikhtiyaar u leedahay shay, fuliso dhammaantood oo si taxaddar leh uga fikir midka aad ugu jeceshahay.
Marka la soo koobo, naqshaddu inay sifiican isu rogto markay u gudbineyso HTML / CSS, waa inaad sameysaa sawir gacmeed dhameystiran, oo ay ka buuxaan fikrado isla markaana aad u cadeysaa waxa aan raadineyno. Inta soo hartay waxaa bixiya karti iyo mala-awaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Muhiimadda sawir hordhac ah oo wanaagsan